Maxay tahay sababta gabadhan ay uga tagtay Sacuudiga? - BBC News Somali
Waqtigaas, waxa keliya ee aan dareemay wuxuu ahaa amakaag. Waxa keliya ee aan sameeyay waa inaan aqriyay warbixin - waxaan u maleynayay in la ii digi doono oo la ii sheegi doono inaanan mar dambe ka hadlin haweenkaas u ololeynayay in haweenka la siiyo xaqa ay u leeyihiin in gaari kaxeeyaan.
UNHCR oo haweenay Sucuudiyad ah ka saartay madaarka Hongkong
Waxaa ka soo wareegatay 25 sano markii ugu dambeysay ee aan Sacuudiga joogay aniga oo carruur ah. Markii aan ku labtay sannadkii hore, waxaan la yaabay sida ay u dhisantay - xeebaha, dhismooyinka laga dukaameysto iyo maqaayado heer sare ah. Intii aan ku guda jiray lixdii maalmood ee aan joogay Sacuudiga, roob badan ayaa da`ay, wax dhif ah ayay ahayd waxaana ku kaftannay inaan aniga roobka kala imid London.
Image caption Basma oo carruur ah iyo waaliddiinteeda
Wax badan kama xusuusan boqortooyada. Waxaan halkaas ku dhashay sanadkii 1989 waxaana magaalada caasimadda ah ee Riyadh kula noolaa waaliddiinteyda Suudaaneyska ahaa. Waxay ku kulmeen jaamacad ku taalla Masar, waxayna soo degeen Sacuudiga markii aabbahay, oo dhaqtar ahaa, uu halkaasi shaqo ka helay. Sanado yar kaddib, waxaa loo beddelay Waqooyiga Ireland - mar kale ayaan soo guurnay. Saddex sano ayaan jiray.
Image caption Basma oo ku sii jeedda Jeddah
Image caption Jamaal Khaashaqji
Iyadoo uu jiray kiiskaasi, ma baqeynin. Sacuudiga uguma socon inaan ahay weriye, waxaan duubayay muuqaal iyo inaan booqdo qoyskeyga. Weli, markii aan caga dhigtay magaalada Jeddah oo ay ii bilaabatay booqashadeydii labada toddobaad ahayd, waxaan ku fekeray, "Maxaan sameeyay?" balse markii aan la kulmay saddex ka tirsan eeddooyinkey waxaan dareemay ammaan.
Waxaa sidoo kale nala socday koox Sacuudiga u dhashay - darawal, caawiye muuqaal duubaha, iyo labo kale oo howsha nala fududeynayay. Inkastoo ninkii kormeeraha ahaa ee nalagu daray uusan aad noo daba geli jirin haddana inuu nala socdo aad bey noo dhibeysay.
Image caption Basma oo cabaayad iibsaneysa
Uma maleyneyn in la i xiri doono - anigoo ilmeynaya ayaan macsalaameeyay eeddooyinkey waxaana aaday garoonka, anigoo ka niyad jabsan inaan dalka ka baxo.
Image caption Basma waxaa lagula taliyay inay joojiso duubidda muuqaalka oo ay ku laabato UK